कृष्णका पाँच रहस्य ! - NepalKhoj
कृष्णका पाँच रहस्य !
नेपालखोज २०७८ भदौ ३० गते ५:००
भगवान् कृष्णको अवतारलाई पूर्णावतार भनिन्छ । श्रीकृष्णको व्यक्तित्व जति विवादास्पद छ उति रहस्यमय छ । यद्यपि उनीहरुको बारेमा धेरै रहस्यहरु लुकेका छन्, तर हामी तपाईंलाई पाँच यस्ता रहस्यहरु बताउन जाँदैछौं जुन तपाईंलाई सायद थाहा थिएन ।
पहिलो रहस्य : भगवान् श्रीकृष्ण विष्णुको आठौं अवतार हुन् । तर देवी र कालिका पुराणअनुसार, उनी कालिका माताको अवतार थिए, विष्णुको होइन । यस्तो एउटा मन्दिर वृन्दावनमा अवस्थित छ, श्रीकृष्णको लीलास्थली । जहाँ कृष्ण कालीको रूपमा पूजा गरिन्छ । उनलाई काली देवी भनिन्छ । यो पनि विश्वास गरिन्छ कि जब राधा अयब्गा नामक एक गोपासँग विवाह गर्नका लागि तय भएको थियो, राधाले उनलाई “कृष्ण–कृष्ण“ भनेर बोलाउन थालिन् । त्यो बेला जब श्री कृष्ण कालीको रूपमा उनको सामुन्ने आए र उनको दुःख हटाए त्यस दिनदेखि श्रीकृष्ण कालीको रूपमा पूजा गरिन्छ ।
देवी पुराणअनुसार भगवान् श्रीकृष्ण विष्णुको अवतार थिएन तर आमा कालीको हो । जबकि उनकी प्यारी राधा देवी लक्ष्मीको अवतार थिइन्, तर महादेवको अवतार थियो । देवी पुराणअनुसार भगवान् महादेव वृषभानुकी छोरी राधाका रूपमा जन्मेका थिए । यसका साथसाथै श्री कृष्ण, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि को धर्म पत्नीहरु पनि महादेवको हिस्सा थिए । पार्वतीका साथीहरु जया–विजया नामका श्रीपाद र वसुदामा नामक गोपहरुको रुपमा अवतार लिए । देवी पुराणअनुसार भगवान विष्णु बलराम र अर्जुनका रूप मा अवतार लिएका थिए । जब पाण्डवहरु निर्वासनको समयमा कामाख्या शक्तिपीठमा पुगे, उनीहरुले त्यहाँ तपस्या गरे । यसबाट प्रसन्न भई आमा प्रकट भए र पाण्डवहरुलाई भने कि म तिमीलाई श्रीकृष्णको रूपमा मद्दत गर्नेछु र कौरवहरुको विनाश गर्नेछु ।
दोस्रो रहस्य : भगवान् कृष्णकी हजुरआमा मारिशा र सौतेनी आमा रोहिणी (बलरामकी आमा) दुवै नाग जनजातिका हुन् । भगवान् कृष्णकी आमाको नाम देवकी थियो । यशोदाकी छोरी, जो भगवान् कृष्णबाट जेलमा परिणत भएकी थिइन्, उनको नाम एकानन्शा थियो, जसलाई आज विन्ध्यवासिनी देवीका रुपमा पूजा गरिन्छ । श्रीमद्भागवतमा उनी नन्दजा देवी भनिन्छ, यसैले उनको अर्को नाम कृष्णनुजा हो । यसको मतलब यो हो कि उनी भगवान् कृष्णकी बहिनी थिइन् । यो बहिनीले श्रीकृष्णको जीवनभर रक्षा गरेकी थिइन् । त्यसैलाई योगमाया भनिन्छ । श्रीमद्भागवत पुराणमा देवी योगमायालाई विन्ध्यवासिनी भनिएको छ, जबकि शिव पुराणमा उनी सतीको एक भागको रूपमा वर्णन गरिएको छ ।
तेस्रो रहस्य : भगवान कृष्णको मांसपेशीहरु धेरै नरम थिए, तर युद्धका बेला उनलाई कडा र खिचिएका थिए, त्यसैले उनको सुन्दर शरीर, जो सामान्यत: केटीको शरीरजस्तै देखिन्थ्यो, युद्धको समयमा धेरै कडा देखिन्थ्यो । शरीरको यो विशेषता कर्ण र द्रौपदीको शरीरमा पनि उपस्थित थियो । त्यस्तै गरी, लोकप्रिय किंवदंतीअनुसार, यो विश्वास गरिन्छ कि मादक गन्ध उनको शरीरबाट बाहिर आउँथ्यो । उनीहरुले यो गन्धलाई आफ्नो गोप्य मिसनमा लुकाउने काम गरे । द्रौपदीको गुण एउटै थियो ।
चौथो रहस्य : भगवान् कृष्णलाई कलारिपट्टूको पहिलो शिक्षक मानिन्छ । कलारिपट्टू जुन कृष्णले आधारशिला राखेपछि बोधी धर्मको माध्यमबाट एक आधुनिक मार्सल आर्टमा विकसित भयो । यो कला ब्रज क्षेत्रको जंगलमा विकसित भएको थियो । यस कारणले, श्री कृष्णको नारायणी सेना भारतको सबैभन्दा भीषण हमला गर्ने सेना बन्यो । यो सेना कौरवहरुको पक्षमा लडे । दण्डिया रास पनि श्री कृष्णद्वारा सुरु भएको थियो । आजकल यो नवरात्रि मा धेरै लोकप्रिय छ ।
पाँचौं : भगवान् कृष्णको जन्म मथुरामा भएको थियो । उनको बचपन गोकुल, वृन्दावन, नन्दगाउँ, बर्साना आदि ठाउँहरुमा बित्यो । उनले द्वारकालाई आफ्नो बासस्थान बनाए र सोमनाथ नजिकको प्रभास क्षेत्रमा शव छाडे । एक दिन उनी यो प्रभास क्षेत्रको जंगलमा एक पीपलको रुखमुनि योग निद्रामा पल्टिरहेका थिए, जब ’जारा’ नामक एक मूर्खले उनलाई गल्तीले हरिण भनी एक विषालु वाण हान्यो, जुन उनको खुट्टाको तलसम्म गयो र भगवान कृष्ण उसले एउटा बहाना बनाएर शरीर त्यागे । जरा आफ्नो अघिल्लो जन्ममा सुग्रिवको भाइ बली थिए जसलाई भगवान् श्रीरामले लुकाएर मारिदिए । उसको बदला यो जन्ममा निस्कियो । पौराणिक कथाअनुसार जब भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो शरीर छाडे, उनको शरीरको कपाल न त सेतो थियो न त उनको शरीरमा कुनै झुर्रहरु थिए, अर्थात् उनी ११९ वर्षको उमेरमा अझै जवान थिए ।